ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW- ရေနံပွတ်တိုက်ကြေးကျယ်ပြန့်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ် Faucet
WOWOW-Oil ပွတ်တိုက်ကြေးကျယ်ကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်းနစ်မြုပ် Faucet
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.815ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 16 ဖောက်သည် ratings
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီဇိုင်းဖြင့် faucet သည်လက်ကိုင်နှစ်ချောင်းဖြင့်ရေပမာဏနှင့်အပူချိန်ကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။
တစ်မိနစ်လျှင် ၁.၅ ဂါလန်နှုန်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသောရေချိုးခန်း faucet သည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းသောချောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ spout ၏အမြင့်ရှိနှင်တံ၊
2320300ORB installation ကိုညွှန်ကြားချက်
၃ ပေါက်အထိုင်တွင် ၄ မှ ၁၆ လက်မကျယ်သည့်ရေချိုးခန်း faucet 4ORB မှအကွာအဝေးသည်သင်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အဆင့်နိမ့်သောအနက်ရောင်ပြီးပြည့်စုံသောအဆင့်မြင့်စတုရန်းမြင့် spout ဒီဇိုင်းသည်ခေတ်သစ်နှင့်ဂန္တ ၀ င်ရေချိုးခန်းအလှဆင်ဒီဇိုင်းအတွက်သင့်လျော်သောအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ။
ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဆင်ပြေသော၊ လှည့်ရန်အဆင်ပြေသောသင့်လျော်သောအရွယ်အစားဖြစ်သော ergonomics ဒီဇိုင်းတွင်လက်ကိုင်ဖြောင့်ခြင်း။
ရေဖိအား: အနည်းဆုံး 0.5 bar, 1.0 ဘားအကြံပြုခဲ့သည်
အဓိကကိုယ်ထည်ပစ္စည်း - အစိုင်အခဲကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး
အဆို့ရှင် - ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်း
ပစ္စည်းကိုင်တွယ်: သွပ် - Alloy
လိုအပ်သောတွင်းအရေအတွက် - ၃
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော aerator သည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းမှုကိုပေးနိုင်ပြီး ၅၀% ကျော်သောရေကိုချွေတာနိုင်သည်။
အဆိုပါ connectors technique ကိုမှတဆင့်တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နေကြသည်, အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့်။
သံချေး၊ ချေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
SKU: 2320300ORB Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: အင်တုံရောနှော, အပေါက်သုံးပေါက်, လက်ကိုင်နှစ်ခု
12.5 x ကို 10.1 x ကို3လက်မ
K သည် *** င2020-06-11
ငါအရမ်းနိမ့်သောစျေးနှုန်းကြောင့်ဤပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန်အနည်းငယ်ချီတုံချတုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီ faucets အမျိုးအစားများကို Home Improvement store များမှ ၀ ယ်ပြီးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၀၀ + ပေးရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အခန်းအားရေချိုးခန်းထဲထည့်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုပြုလုပ်သောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးသည်ကြေးဝါဖြင့်ဖြစ်ပြီးအားလုံးသော gaskets များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သတ္တု finish ကိုလည်းအလွန်ကောင်းစွာလုပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ထည့်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
L ကို *** တစ်ဦး2020-06-16
သူတို့က Home Depot နဲ့ Lowe တို့လိုကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်လောက်နဲ့တူနေလို့ပါ။ သူတို့တစ်ချိန်က install လုပ်ခဲ့ပုံကိုငါတကယ်သဘောကျခဲ့တယ်။
B က *** ဏ2020-06-19
၎င်းကိုအမှုန့်ခန်းပြုပြင်မှုပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလွန်ပျော်ရွှင်, အထူးသဖြင့်ပေးဆောင်စျေးနှုန်းအဘို့။ လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးရောက်ရှိခဲ့သည်။ Nice စတိုင်, မထိုက်မတန်နှင့် finish ကို။ အဆိုပါ faucet သူ့ဟာသူငါ့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုအရည်အသွေးဖြစ်စေသောကြောင့်တော်တော်လေးပေါ့ပါးခံစားရပေမယ့်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပူ / အအေးဘူးသီးများသည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်။ စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းကိရိယာနှင့်အမြန်ဆက်သွယ်မှုများက၎င်းကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်စေခဲ့သည်။ ၁၀၀% သေချာမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သိသောအရာများကိုသိရှိပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မံဝယ်ယူပါမည်။
အကြမ်းခံပုံရသည်ကောင်းသော finish ကို။ ကိုင်တွယ်မှုကအစိုင်အခဲခံစားရပြီးအခန်းထဲရှိအရာအားလုံးနှင့်အတူနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ကောင်းသောတန်ဖိုး, အထူးသဖြင့်ကျယ်ပြန့်သည်။ အသစ်သောအချည်းနှီးသောထိပ်သို့ install လုပ်ပါ။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာယိုစီးမှုသည်ဘားပေါ်တွင်တွန်းခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲအဆို့ပေါ်တွင်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊
တစ်ဦးက *** ဌ2020-06-27
ဒီ faucet ၏စျေးနှုန်းအဘို့, ငါတို့ဝယ်ယူနှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းကကက်ဘိနက်ကိုမထည့်ခင်ကောင်တာပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကြည့်ရှုရန်ပိုရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။ ဒါဟာအစအလွန်ဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်ငါဘာမှခြစ်ရလိမ့်မည်ဟုအာမခံထားဖို့ကိုချစ်၏။
Z ကို *** t ကို2020-06-29
ငါဒီနှစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တန်ဖိုးကကြီးတယ်။ အဆိုပါ faucet ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည်။ ဆက်သွယ်မှုတွေကကောင်းတယ်။ ငါပေါက်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခါမှမပြဘူး။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ကောင်းမွန်ပြီးကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်
L ကို *** င2020-07-12
ငါဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်ချင်တယ်၊ ဘတ်ဂျက်လည်းနည်းတယ်။ ငါဒါကိုကြည့်ရတာကြိုက်ပေမဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့အခြားသူတွေကဒေါ်လာ ၁၀၀ + ဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကိုအခြားအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ချောင်ပေါ်တွင်ဝယ်ယူငါပြုမိသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်သည်။ နောက်လာမည့်ရေချိုးခန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ဝယ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
R ကို *** ဎ2020-07-24
လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ် faucets ။ install လုပ်ရန်စူပါလွယ်ကူသည်။ ခေတ်ပြိုင်နှင့်ကြော့မော့။ လေးလံပြီးကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ထုတ်ကုန်များကိုထပ်မံဝယ်ယူမည်။
B က *** ဋ2020-07-26
ငါကတဆင့်ရေအလုံအလောက်စီးဆင်းမသွားစေတဲ့ faucet နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ငါပတ်ပတ်လည် nozzle အဘို့ဤဝယ်ယူခြားနားချက်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အပြင်လည်ပတ်မှုအလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အစားထိုးလိုက်သောအလွန်စျေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
တစ်ဦးက *** r2020-07-28
လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာ! စတိုးဆိုင်၌ဤသို့သောအရာတစ်ခုခုသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောကြောင့်ယိုစီးမှုနှင့်အတူမလာခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်! တိုင်းတစ်ပြားထိုက်သည်
J ကို *** r2020-07-30
Nice faucet! 1/2 to 3/8 compression fitting hoses များဖြစ်သော ၁၅ လက်မအရှည်အပါအ ၀ င်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းရန်အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပစ္စည်းတွေပိုရဖို့အတွက်စတိုးဆိုင်ကိုသွားစရာမလိုဘူး!
J ကို *** တစ်ဦး2020-08-02
ငါရေချိုးခန်း faucet များအတွက်ဒေါ်လာတစ်ရာပေးဆောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်ကောင်းတဲ့ချင်တယ်။
ဒေါ်လာ ၈၀ အတွက်ဒီတစ်ခုဟာငါမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ စျေးကြီးတယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်
: P *** y က2020-08-13
ရေချိုးခန်းအတွက်အသုံး ၀ င်သောဖြေရှင်းချက်၊ ခေတ်မီဒီဇိုင်း၊ လီဗာလက်ကိုင်နှင့်လျှပ်တပြက်မီးမပါဘဲယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ငါ *** s ကို2020-08-18
လုံးဝဤ faucets ကိုချစ်! ပိုက်ဆံများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုး။ အဖြစ်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူ! ဤအရာနှင့်မမှားနိုင်ပါ
N ကို *** ဎ2020-08-24
ငါ faucet ၏အသွင်အပြင်ကိုကြိုက်တယ်, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အနည်းငယ်မျှသာသေးငယ်တဲ့။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူရုံအနည်းငယ်ပိုကြီးခဲ့လိုရှိ၏ ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံရကျိုးနပ်။
: P *** တစ်ဦး2020-08-29
ဒီရေချိုးခန်းဟာငါ့ရေချိုးခန်းထဲမှာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကျိန်းသေငါ၏အ guest ည့်သည်ရေချိုးခန်းအဘို့အပို2အမိန့်လိမ့်မည် !!